Degmooyinka gobolka Banaadir oo ka wadahadlay tacadiyada loo gaysto Haweenka. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Degmooyinka gobolka Banaadir oo ka wadahadlay tacadiyada loo gaysto Haweenka.
Degmooyinka gobolka Banaadir oo ka wadahadlay tacadiyada loo gaysto Haweenka.
Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa gudoomiyay shirka totobaadlaha ah ee degmooyinka gobalka Banaadir oo looga hadlay todobaadkaan arrimaha tacaddiyada loo gaysto haweenka Soomaaliyeed waxaa uuna ka dhacay xarunta ururka dhalinyarada gobolka Banaadir.
Shirkaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan gudoomiye Ku xigeenada Maamulka gobolka banaadir sida maamulka iyo maaliyada,arrimaha bulshada,amniga iyo siyaasada iyo howlaha guud iyo agaasime waaxeedyada gobolka.
Sidoo kale waxaa goob joog ka ahaa saraakiisha ciidanka gobolka ee uu hogaaminayay taliyaha qaybta guud ee gobolka iyo gudoomiyayaasha17ka degmo ee gobolka Banaadir.
Qodobada shirka diiradda Lagu saaray waxaa sidoo kale ka mid ahaa arrimaha Amniga, Nadaafadda iyo ka hortagga maandooriya siiba goobaha lagu iibiyo ee ku yaalla caasimada, waxaana guddoomiye cumar filish uu sheegay in guud ahaan maamulka gobolka banaadir looga baahanyahay inuu si adag ula dagaalmo.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Gaalkacyo+sawirro.
Next articleSafiirka Soomaaliya ee Sudan iyo dhiggiisa Norway oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal.